နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိယအကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ် ရေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိယအကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ် ရေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 13, 2017 In: State Counsellor, State Counsellor NewsNo Comments
ရန်ကုန်- ဒီဇင်ဘာ ၁၁
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့်တတိယအကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ်ရေညီလာခံ (The 3rd Asia – Pacific Water Summit – 3rd APWS ) ဖွင့်ပွဲကို ယနေနံနက် (၉)နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
တတိယအကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ် ရေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ အာရှ – ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း (၄၈)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ဦးအုန်းမောင်၊ ဦးကျော်တင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရေနှင့်ဆက်နွယ်သော ၀န်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ သံတမန်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင်-
မကြာသေးမီက ၇၂ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၂၈ ခုနှစ် ၁ဝ နှစ်တာကာလအား စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ယခုညီလာခံကျင်းပသည့်ကာလသည် အလွန်ပင် အချိန်အခါ သင့်ပါကြောင်း၊
အဆိုပါဆယ်စုနှစ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေး၊ ရေအရင်း အမြစ်များအပေါ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နိုင်ငံတကာမှ သဘောတူချမှတ်ထားသော ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် အဆင့်အားလုံးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယခုညီလာခံသည် ရေနှင့်ဆက်နွယ်သည့် လုပ်ငန်းများမှရရှိခဲ့သော ကောင်းမွန်သည့် အတွေ့ အကြုံများ ဖလှယ်ခြင်း၊ ဘက်စုံရေစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းများဖော်ထုတ်ခြင်း တို့ အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေ ၁.၇ဘီလီယံသည် အခြေခံတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၂၀၅၀ခုနှစ်တွင် ၅.၂ဘီလီယံခန့်အထိ တိုးမြင့်လာမည်ဟုသုံးသပ်ရသည့် အတွက် ရေအရင်းအမြစ်မလုံလောက်မှုအပေါ်များစွာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါကြောင်း၊
၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင်အာရှလူဦးရေ၏ ၃.၄ ဘီလီယံခန့်သည် ရေနှင့်စပ်လျဉ်း၍အခက်အခဲရှိသည့် နေရာများ၌ နေထိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါကြောင်း၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသမှ လူဦးရေသန်း ၃၃၀ ခန့်သည် တစ်ရက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၉ အောက်သာ ရရှိသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နေရပြီး လူဦးရေသန်း ၃၀၀ ခန့်မှာ သန့်ရှင်းသော သောက်ရေရရှိခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ဖြစ်ပေါ်စေသောဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုသည် အခြားဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုများပြားလာကြောင်း၊ အဆိုပါ အချက်များသည်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက် ပြုပြင်ရမည့် အချက်များ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အထူပြောဆုံးဒေသဖြစ်ရာညီညွတ်မှုဖြင့် ကြံ့ကြံ့ခံတုံ့ပြန်ကြရန် တွန်းအားပေး သကဲ့သို့ ရှိပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကွဲပြားခြားနားသော အစီအစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများက စုစည်းညီညွတ်သော အစီအစဉ်များ ချမှတ်နိုင်မှသာလျှင် ရေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။ လူတိုင်းအတွက်ရေသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်း အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေကြောင်း၊ ရေကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများကို လျှော့ချပြီး ရေကိုအခြေခံသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရရှိစေရန်အချက် (၂)ချက်ကို ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပထမအချက်မှာရေကို အခြေခံသည့် စီးပွားရေးကို ဖန်တီးသွားရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာရေနှင့် ဆက်နွယ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၌ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများဆောင်ရွက် သွားရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ – မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအရင်းအမြစ် များစွာရှိသည့်အပြင် ရေအားမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်မှုလည်း များပြားပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ရေအရင်းအမြစ်များပြားခြင်းသည် ရေသယံဇာတရှားပါးမှုမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း၊ လိုအပ်သည့်အချိန်၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် လုံလောက်သောရေ မရရှိခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဓိကမှာ မိုးရွာသွန်းမှု မညီမျှခြင်း၊ ပြောင်းလဲလာသည့် ရေသယံဇာတအခြေအနေများနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
လူဦးရေများပြားလာမှုနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးလာမှု တို့ကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့များတွင် ရေလိုအပ်ချက် မြင့်မားလာပါကြောင်း၊ ထို့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမျာ တိုးချဲ့လာခြင်းနှင့် ကျေးရွာအခြေပြု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ကျေးလက်ဒေသများတွင် ရေလိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာပါကြောင်း၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် စက်မှုဇုန်များကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအပေါ် ဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကြောင်း၊ ရေရရှိရန်အတွက် စွမ်းအင်လိုအပ်သကဲ့သို့ စွမ်းအင်ထုတ်ယူရန်အတွက်လည်း ရေလိုအပ်ပါကြောင်း၊ အစားအစာ ဖူလုံရေးသည်လည်း ရေနှင့်စွမ်းအင် ရရှိနိုင်မှုအပေါ် မူတည်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ရေသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားလာပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံသည် Myanmar National Water Law ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲ လျက် ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီသည် ရေ အခြေခံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဘေးအန္တရာယ်များ လျော့ပါးရေး ဟူသည့် အရေးကြီးသည့် တာဝန်ကြီးနှစ်ရပ်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရေနှင့်ပတ်သက်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာရေးအတွက် လုံခြုံရေး ကောင်းမွန်မှုရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်သည့်မူဝါဒ၊ ဥပဒေမူဘောင်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်တို့ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊
ယခုရေညီလာခံမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုမည့် အနာဂတ် မူဝါဒလမ်းပြမြေပုံအတွက် ရေသယံဇာတ ဖူလုံမှုဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်များ ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး၏ နိုင်ငံရေးဆန္ဒ၊ အားပေး ကူညီမှုတို့ကြောင့် အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ရေသယံဇာတဖူလုံမှုကို အောင်မြင်စွာရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုရူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ (President of the Republic of Nauru ) H.E.Mr. Baron Waqa နှင့် President of the APWF Mr.Yoshiro Mori ကိုယ်စား Vice President of Japan Water Forum Mr. Yoshinori Imai တို့ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကြသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း (၄၈) နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသည်။
တတိယအကြိမ် အာရှ-ပစိဖိတ်ရေညီလာခံကို နှစ်ရက်တာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၄၈ နိုင်ငံမှ ကို်ယ်စားလှယ် ၆၀၀ ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။ ပထမအကြိမ် အာရှ-ပစိဖိတ် ရေညီလာခံကို ဂျပန်နိုင်ငံ၌ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် အာရှ-ပစိဖိတ်ရေညီလာခံကို ထိုင်းနိုင်ငံ၌လည်းကောင်း ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခုတတိယအကြိမ်မြောက် ရေညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တတိယအကွိမျ အာရှ- ပစိဖိတျ ရညေီလာခံဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျအမှာစကားပွောကွား
ရနျကုနျ- ဒီဇငျဘာ ၁၁
မွနျမာနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပသညျ့တတိယအကွိမျ အာရှ- ပစိဖိတျရညေီလာခံ (The 3rd Asia – Pacific Water Summit – 3rdAPWS) ဖှငျ့ပှဲကို ယနနေံနကျ (၉)နာရီခှဲက ရနျကုနျမွို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယျ၌ ကငျြးပရာ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တကျရောကျ အမှာစကားပွောကွားသညျ။
တတိယအကွိမျ အာရှ- ပစိဖိတျ ရညေီလာခံ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားသို့ အမြိုးသားအဆငျ့ ရအေရငျးအမွဈ ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယသမ်မတဦးဟငျနရီဗနျထီးယူ၊ အာရှ – ပစိဖိတျဒသေတှငျး (၄၈)နိုငျငံမှ နိုငျငံ့အကွီးအကဲမြား၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဖမွေငျ့၊ ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ ဒေါကျတာ ဝငျးမွတျအေး၊ ဦးအုနျးမောငျ၊ ဦးကြျောတငျ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး၊ ဒုတိယဝနျကွီးမြား၊ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးဝနျကွီးမြား၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ ရနှေငျ့ ဆကျနှယျသော ဝနျကွီးဌာန အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးမြားမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ ပညာရှငျမြား၊ ဌာနဆိုငျရာအကွီးအကဲမြား၊ သံတမနျမြားနှငျ့ ဖိတျကွားထားသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ရှေးဦးစှာ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားရာတှငျ-
မကွာသေးမီက ၇၂ ကွိမျမွောကျ ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေညေီလာခံတှငျ ၂ဝ၁၈ ခုနှဈမှ ၂ဝ၂၈ ခုနှဈ ၁ဝ နှဈတာကာလအား စဉျဆကျမပွတျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ ရခေေါငျးစဉျဖွငျ့ အကောငျအထညျဖျောရေး ကာလအဖွဈ သတျမှတျခဲ့ရာ ယခုညီလာခံကငျြးပသညျ့ကာလသညျ အလှနျပငျ အခြိနျအခါ သငျ့ပါကွောငျး၊ အဆိုပါဆယျစုနှဈ၏ ရညျမှနျးခကျြမှာ စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုရရှိရေး၊ ရအေရငျး အမွဈမြားအပျေါ ဘကျစုံစီမံခနျ့ခှဲမှု၊ နိုငျငံတကာမှ သဘောတူခမြှတျထားသော ရနှေငျ့သကျဆိုငျ သညျ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျမြား အောငျမွငျရေးအတှကျ အဆငျ့အားလုံးတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနှငျ့ မိတျဖကျဆကျဆံမှုတိုးမွှငျ့သှားရနျ ဖွဈပါကွောငျး၊
ယခုညီလာခံသညျ ရနှေငျ့ဆကျနှယျသညျ့ လုပျငနျးမြားမှ ရရှိခဲ့သော ကောငျးမှနျသညျ့ အတှေ့ အကွုံမြား ဖလှယျခွငျး၊ ဘကျစုံရစေီမံခနျ့ခှဲမှုအတှကျ အကွံဉာဏျကောငျးမြားဖျောထုတျခွငျးတို့ အတှကျ အခှငျ့အရေးကောငျး တဈခုဖွဈပါကွောငျး၊ ကမ်ဘာပျေါရှိ လူဦးရေ ၁.၇ ဘီလီယံသညျ အခွခေံ တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးမှု ရရှိနိုငျခွငျးမရှိပါကွောငျး၊ ကမ်ဘာ့လူဦးရသေညျ ၂၀၅ဝ ခုနှဈတှငျ ၅.၂ ဘီလီယံခနျ့အထိ တိုးမွငျ့လာမညျဟုသုံးသပျရသညျ့ အတှကျ ရအေရငျးအမွဈ မလုံလောကျမှုအပျေါ မြားစှာ စိုးရိမျဖှယျရာဖွဈပါကွောငျး၊
၂၀၅၀ ခုနှဈတှငျအာရှလူဦးရေ၏ ၃.၄ ဘီလီယံခနျ့သညျ ရနှေငျ့စပျလဉျြး၍အခကျအခဲရှိသညျ့ နရောမြား၌ နထေိုငျရလိမျ့မညျဟု ခနျ့မှနျးရပါကွောငျး၊ အာရှ-ပစိဖိတျဒသေမှ လူဦးရသေနျး ၃၃၀ ခနျ့သညျ တဈရကျလြှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁.၉ အောကျသာ ရရှိသော အလုပျမြားကို လုပျကိုငျနရေပွီး လူဦးရသေနျး ၃၀၀ ခနျ့မှာ သနျ့ရှငျးသော သောကျရရေရှိခွငျးမရှိပါကွောငျး၊ ထို့အပွငျ ဖနျလုံအိမျ အာနိသငျဖွဈပျေါစသေောဓာတျငှေ့ ထုတျလှတျမှုသညျ အခွားဒသေမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျလြှငျ ပိုမိုမြားပွားလာကွောငျး၊ အဆိုပါ အခကျြမြားသညျဒသေတဈခုလုံးအတှကျ ပွုပွငျရမညျ့ အခကျြမြား ဖွဈပါကွောငျး၊ အာရှ- ပစိဖိတျဒသေသညျ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော သဘာဝဘေးအန်တရာယျ အထူပွောဆုံးဒသေဖွဈရာညီညှတျမှုဖွငျ့ ကွံ့ကွံ့ခံတုံ့ပွနျကွရနျ တှနျးအားပေး သကဲ့သို့ ရှိပါကွောငျး၊ သို့ရာတှငျ နိုငျငံအသီးသီးမှ ကှဲပွားခွားနားသော အစီအစဉျမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး၊ ဒသေတှငျးနိုငျငံမြားက စုစညျးညီညှတျသော အစီအစဉျမြား ခမြှတျနိုငျမှသာလြှငျ ရနှေငျ့စပျလဉျြးသညျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြားကို ထိထိရောကျရောကျ တုံ့ပွနျနိုငျမညျ ဖွဈပါကွောငျး။ – လူတိုငျးအတှကျရသေညျ မရှိမဖွဈလိုအပျသကဲ့သို့ နိုငျငံတဈနိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အတှကျလညျးအဓိက အခနျးကဏ်ဍမှပါဝငျနကွေောငျး၊ ရကွေောငျ့ ထိခိုကျ ပကျြစီးမှုမြားကို လြှော့ခပြွီး ရကေိုအခွခေံသညျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားရရှိစရေနျအခကျြ (၂)ခကျြကို ဆောငျရှကျသှားရနျ လိုအပျကွောငျး၊ ပထမအခကျြမှာရကေို အခွခေံသညျ့ စီးပှားရေးကို ဖနျတီးသှားရနျ ဖွဈပါကွောငျး၊ ဒုတိယအခကျြမှာရနှေငျ့ ဆကျနှယျသော သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား စီမံခနျ့ခှဲမှု၌ ရငျးနှီး မွှုပျနှံမှုမြားဆောငျရှကျ သှားရနျဖွဈပါကွောငျး၊ – မွနျမာနိုငျငံတှငျ ရအေရငျးအမွဈ မြားစှာရှိသညျ့အပွငျ ရအေားမှလြှပျစဈဓာတျအား ထုတျလုပျနိုငျမှုလညျး မြားပွားပါကွောငျး၊ သို့ရာတှငျ ရအေရငျးအမွဈမြားပွားခွငျးသညျ ရသေယံ ဇာတရှားပါးမှုမရှိဟု ဆိုလိုခွငျးမဟုတျပါကွောငျး၊ လိုအပျသညျ့အခြိနျ၊ လိုအပျသညျ့နရောတှငျ လုံလောကျသောရမေရရှိခွငျးဖွဈပါကွောငျး၊ အဓိကမှာ မိုးရှာသှနျးမှု မညီမြှခွငျး၊ ပွောငျးလဲလာသညျ့ ရသေယံဇာတအခွအေနမြေားနှငျ့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှု တို့ကွောငျ့ဖွဈပါကွောငျး၊
လူဦးရမြေားပွားလာမှုနှငျ့ မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးလာမှု တို့ကွောငျ့လညျး မွနျမာနိုငျငံ၏မွို့မြားတှငျ ရလေိုအပျခကျြ မွငျ့မားလာပါကွောငျး၊ ထို့အပွငျစိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးမြာ တိုးခြဲ့လာခွငျးနှငျ့ ကြေးရှာအခွပွေု စီးပှားရေး လုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးလာခွငျးတို့ကွောငျ့လညျး ကြေးလကျ ဒသေမြားတှငျ ရလေိုအပျခကျြ မွငျ့တကျလာပါကွောငျး၊ အထူးစီးပှားရေးဇုနျမြားနှငျ့ စကျမှုဇုနျ မြားကွောငျ့လညျး မွနျမာနိုငျငံ၏ ရသေယံဇာတအရငျးအမွဈမြားအပျေါ ဖိအားမြား ဖွဈပျေါလာပါကွောငျး၊ ရရေရှိရနျအတှကျ စှမျးအငျ လိုအပျသကဲ့သို့ စှမျးအငျထုတျယူရနျ အတှကျလညျး ရလေိုအပျပါကွောငျး၊ အစားအစာ ဖူလုံရေးသညျလညျး ရနှေငျ့စှမျးအငျ ရရှိနိုငျမှုအပျေါ မူတညျလကျြ ရှိပါကွောငျး၊ ရသေညျ စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အဓိကမောငျးနှငျအား ဖွဈသညျမှာ ထငျရှားလာပါကွောငျး၊
မွနျမာနိုငျငံသညျ Myanmar National Water Law ကိုကမ်ဘာ့ဘဏျအကူအညီဖွငျ့ ရေးဆှဲလကျြရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏အမြိုးသားရအေရငျးအမွဈကျောမတီသညျ ရေ အခွခေံ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ရကွေောငျ့ဖွဈပျေါသော ဘေးအန်တရာယျမြား လြော့ပါးရေး ဟူသညျ့ အရေးကွီးသညျ့ တာဝနျကွီးနှဈရပျကို ထမျးဆောငျလကျြရှိပါကွောငျး၊ အစိုးရအနဖွေငျ့ ရနှေငျ့ပတျသကျသညျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား တိုးတကျလာရေးအတှကျ လုံခွုံရေး ကောငျးမှနျမှုရှိစရေနျနှငျ့ လိုအပျသညျ့မူဝါဒ၊ ဥပဒမေူဘောငျမြား ဖှံ့ဖွိုးစရေနျတို့ကိုလညျး အကောငျ အထညျဖျော ဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ရကေဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပွညျတှငျးပွညျပ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားကို ဖိတျချေါပါကွောငျး၊
ယခုရညေီလာခံမှ စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို အထောကျအကူပွုမညျ့ အနာဂတျ မူဝါဒလမျးပွမွပေုံအတှကျ ရသေယံဇာတ ဖူလုံမှုဆိုငျရာ အရေးကွီးသညျ့ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးခကျြမြား ရရှိနိုငျမညျဟု ယုံကွညျပါကွောငျး၊ ပါဝငျပတျသကျသူအားလုံး၏ နိုငျငံရေးဆန်ဒ၊ အားပေး ကူညီမှုတို့ကွောငျ့ အာရှနှငျ့ပစိဖိတျဒသေတှငျး ရသေယံဇာတဖူလုံမှုကို အောငျမွငျစှာရရှိနိုငျမညျ ဖွဈပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နိုရူသမ်မတနိုငျငံသမ်မတ (President of the Republic of Nauru ) H.E.Mr. Baron Waqa နှငျ့ President of the APWF Mr.Yoshiro Mori ကိုယျစား Vice President of Japan Water Forum Mr. Yoshinori Imai တို့ကအဖှငျ့အမှာစကားပွောကွားကွသညျ။ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားအပွီးတှငျ နျိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ညီလာခံသို့ တကျရောကျလာကွသညျ့ အာရှ- ပစိဖိတျဒသေတှငျး (၄၈) နိုငျငံမှ ကိုယျစားလှယျ မြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးမှတျတမျးတငျ ဓါတျပုံရိုကျကူးသညျ။
တတိယအကွိမျ အာရှ-ပစိဖိတျရညေီလာခံကို နှဈရကျတာကငျြးပသှားမညျဖွဈပွီး နိုငျငံပေါငျး ၄၈ နိုငျငံမှ ကိုယျစားလှယျ ၆၀၀ ခနျ့ တကျရောကျကွသညျ။ ပထမအကွိမျ အာရှ-ပစိဖိတျ ရညေီလာခံကို ဂပြနျနိုငျငံ၌ လညျးကောငျး၊ ဒုတိယအကွိမျ အာရှ-ပစိဖိတျရညေီလာခံကို ထိုငျးနိုငျငံ၌လညျးကောငျး ကငျြးပခဲ့ပွီး ယခုတတိယအကွိမျမွောကျ ရညေီလာခံကို မွနျမာနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံ ကငျြးပခွငျးဖွဈသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တတိယအကြိမ် အာရှ- ပစိဖိတ် ရေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတို့မှ ၀န်ကြီးများအား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ